Ny fanindronan-nonona: izay rehetra tokony ho fantatrao | Ny fanaovana tatoazy
Tsy toy ny tatoazy, a nanindrona antsy Tsy mitaky fieritreretana mialoha loatra, izany hoe, tianao na tsy tianao ny manao kavina am-bolo. Ny fanindronana ny nono dia malaza amin'ny lahy sy ny vavy, ary hitan'ny maro ho manintona be sy manintona. Raha vehivavy ianao ary maniry hiteraka sy hampinono, dia eny tokony hisaintsaina izany ianao. Fa amin'ny farany manindrona, na ataonao izany na tsia.
Tokony ho vonona hanao izany ianao manomboka izao mitaky fotoana lava kely vao sitrana noho ny tatoazy - eny, bebe kokoa aza. Izany dia vokatry ny fihenjanana isan'andro amin'ny vatana ary satria ny nipples dia faritra be fikorontanana ary raha manao firaisana ianao dia azo adinina bebe kokoa noho ny mahazatra ihany koa. Fa raha vonona hiatrika ny fahasosorana sy ny foza afaka mivoaka miaraka amin'ny fotoana fanasitranana ianao, ary tianao ireo karazana fanindronana ireo… dia tsy misy azonao atao hisakanana anao tsy hanao izany.
1 Be ny foza
2 Vahaolana amin'ny ranomasina
3 Zava-dehibe 8 tsy tokony hohadinoinao ny manindrona nipple
3.1 Rehefa sitrana ianao dia hadinonao ny fanaintainana taloha
3.2 Tsaroanao fa manana izany ianao rehefa misy zavatra ratsy mitranga
3.3 Hitafy sy hanaisotra ny fitafianao amin'ny fomba hafa ianao
3.4 Rehefa mividy akanjo ianao dia hoheverinao ny fanindronana anao
3.5 Fantatry ny olon-tianao ny fotoana ananany sy ny fotoana tsy tokony hikasihany ny vonoanao
3.6 Hahatsapa fientanentanana ianao rehefa mividy kavina ho an'ny nononao
3.7 Ny savony izay tsy miandany amin'ny pH dia tsy hikasika ilay faritra mandritra ny fotoana kelikely
3.8 Hilaza aminao izy ireo fa tsy ho afaka minono mihitsy
Be ny foza
Ilaina ny mitadidy ao an-tsaina fa mandritra ny fizotran'ny fanasitranana dia azo inoana fa hahita hodi-kazo betsaka ianao - scabs. Voalohany, ny lalana fidirana mankamin'ny lavaka dia handratra eo noho eo, aorian'ny fanjaitra rehetra dia tsy maintsy mandalo faritra sasany saro-pady amin'ny vatana.
Aorian'ny fanindronana dia ho tsapanao ny fanindronana mafy avy eo amin'ny nipple ka hatrany amin'ny rantsantanana, fa hanjavona vetivety izany. Raha vantany vao tapitra ity ampahany ratsy indrindra ity dia hahita scabbing ianao izay mety haharitra mandritra ny herinandro sy volana maro mihitsy. izany dia miankina amin'ny karazana fanasitranana anananao.
Vahaolana amin'ny ranomasina
Misy olona mampiasa vahaolana an-dranomasina - azonao atao ao an-trano amin'ny rano sy sira izany - hanasitranana azy. Ny sira amoron-dranomasina amin'ny rano dia hanampy anao hamono ny ratra ary koa, mba hilamina ny fanaintainana izay tsapanao ao amin'ilay faritra. Raha vehivavy ianao, ny filamatra dia ny alina voalohany hatorianao amin'ny bra madio dia tokony ho fanatanjahan-tena ny bra.
Hatreto dia azonao atao ny mamaky ny zavatra ho tsapanao rehefa manindrona nono ianao ary koa, inona no tokony hataonao mba hahasitrana azy taloha ary koa, mba tsy handratra be. Raha vantany vao jerenao ity dia tsara ihany koa ny fiheveranao ireo lafiny manan-danja hafa momba ny fanindronan-nonona izay mety tsy noraharahinao. Aza very tsipiriany.
Zava-dehibe 8 tsy tokony hohadinoinao ny manindrona nipple
Rehefa sitrana ianao dia hadinonao ny fanaintainana taloha
Raha vao sitrana ilay ratra dia hadinonao ny fanaintainana rehefa manindrona ary koa ny fanaintainana amin'ny fizotran'ny fanasitranana. Hahatsapa ho tsara kokoa ianao ary ho afaka hikasika izany ianao nefa tsy hatahotra sao handratra azy toy ny hoe vaky ny nononao.
Tsaroanao fa manana izany ianao rehefa misy zavatra ratsy mitranga
Rehefa afaka kelikely, dia hohadinoinao ny fanindronana anao satria lasa ampahany amin'ny maha-izy anao fotsiny izy ireo. Mandra-pahatongan'izany, ilay ampahan'ny maha-ianao anao amin'ny akanjonao sy ny fanaintainanao dia mampahatsiahy anao fa eny, fa ny fanindronana anao dia zavatra misy ary mbola eo izy ireo, eo amin'ny toerana nanaovanao izany.
Hitafy sy hanaisotra ny fitafianao amin'ny fomba hafa ianao
Hanao izany ianao, amin'ity fomba ity dia hialanao fa ny fanindronana dia mahatratra anao na aiza na aiza toy ny lobanao amin'ny maraina rehefa torimaso torimaso ianao rehefa miakanjo. Hanomboka hisarika ny lobanao eo ambonin'ny lohanao ianao ary hisintona ny sandrinao hamaky azy rehefa misintona ny tratrany ianao ary mihazona ny lobaka lavitra ny nipples araka izay avelan'ny lamba. Amin'ny voalohany dia toa hafahafa izy io, fa io no safidy tsara indrindra hisorohana ny fanaintainana ary avy eo, ho zatra izany ... Ho vitanao ho azy.
Rehefa mividy akanjo ianao dia hoheverinao ny fanindronana anao
Rehefa mividy akanjo ianao dia hojerenao ny fanindronana ny nononao mba ho hadino ho anao ny lamba ba nataony na akanjo ba tery tery. Hividy akanjo ianao mieritreritra fa ny zavatra farany tadiavinao dia ny manantona ny nonon'izy ireo ary izany dia amin'ny tsy fitandremana na fanadalana tsy nahy ny fanindronana sy ny nonon-doha mankany aorian'ny fitafiana - miaraka amin'ny fanaintainana mety hitranga rehetra-.
Fantatry ny olon-tianao ny fotoana ananany sy ny fotoana tsy tokony hikasihany ny vonoanao
Ny tena izy dia ny fanindronana ny nonon'ny nipple dia mahafinaritra be ny manao firaisana. Raha tsorina dia tsy maintsy hazavainao amin'ny olon-tianao izany rehefa miala voly izy ary rehefa mitsahatra tsy manao azy intsony. Mila manazava fotsiny amin'ny namanao ianao ny fomba hikasihana azy na ny zavatra tianao mifandraika amin'ny foreplay izay mety ho ny protagonist koa ny fanindrohana.
Hahatsapa fientanentanana ianao rehefa mividy kavina ho an'ny nononao
Rehefa handeha hividy kavina vaovao ho an'ny nononao ianao dia hahatsapa fientanentanana mividy firavaka vaovao ho an'ny fanindronana. Hahatsapa ho tsara kokoa aza ianao noho ny rehefa mandeha mividy zavatra mahazatra kokoa toy ny akanjo. Toa adala izany fa raha manindrona antsy ianao dia ho fantatrao izay lazaiko.
Ny savony izay tsy miandany amin'ny pH dia tsy hikasika ilay faritra mandritra ny fotoana kelikely
Na dia efa sitrana tanteraka aza izy ireo, ny savony tsy miandany dia mety hijanona amin'izany, hadino vetivety. Na ny fikosoham-bary na ny savony misy menaka manitra ary kely kokoa ny colognes dia tsy hikasika ny faritra misy anao Ho fantatrao haingana fa ny vokatra fandroana dia ho an'ny ampahany amin'ny vatana izay tsy manana bara vy kely mandalo eo afovoany.
Hilaza aminao izy ireo fa tsy ho afaka minono mihitsy
Raha vehivavy ianao dia hitranga aminao izany. Tokony ho fantatrao fa tsy marina izany, raha te hampinono tsara ianao dia esorinao ny fitevehana rehefa manome sakafo ny zanakao ianao, fotoana. Fa maninona no heverin'izy ireo fa te hanan-janaka ianao? Ao an-tsainao ve izy ireo hahafantatra ny hevitrao?
Inona no fanindronana tsara tarehy indrindra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Tattoos on » Ny fanindronan-nonona: izay rehetra tokony ho fantatrao
Manana fanontaniana aho, nanao ny fanindronan'ny nononako nanao 3 volana sy tapany lasa izay ary tsy nanana olana tamin'izy ireo aho. Saingy tiako ho fantatra raha afaka manao firaisana ara-nofo izay misy milelaka nono na zavatra hafa aho, tsy mankarary na mangidihidy izany, fa manome ahy fiheverana satria misy foza kely ary tsy heveriko fa mety ho an'ny namako izany. minono izy ireo. mandra-pahoviana no hiandrasako?
Salama, te hanontany anao ny toerana manokana hametrahana ny fanindronana aho, maninona ny namako no nametraka azy ary matahotra sao diso toerana io. Napetrak'izy ireo tsara teo ambanin'ilay siny ilay saika naka ny ampahany tamin'ny areola. Miteraka olana ve izany? Ivelan'ny estetika? Miandrasa azafady ny valinteninao, ary raha misy fomba ahafahantsika mifampiresaka mba hanazava tsara, angamba maneho hevitra ratsy eto aho
Salama ry zalahy tsara, manoro hevitra ny rehetra aho mba hanaraka tsara ny fizotran'ny fanasitranana, tsy manam-paharetana aho ary nieritreritra fa tsy hisy na inona na inona hitranga manasa savony amin'ny vatana (manitra avy any an-tsena) dia tratran'ny aretina iray aho ka nivonto intelo ny haben'ny haben'ny rahona ny nonoko ary mangidihidy be. Tsy maintsy naka antibiotika am-bava sy menaka fanefitra antibiotika aho. Mazava ho azy fa tanan'i Santo ireo rongony ireo.
Salama! Nahazo tindona nono aho 2 andro lasa izay ary heveriko fa fohy loatra ny fametahan barbel, azoko atao ve ny manova azy amin'izao andro izao sa inona no tsara indrindra azoko atao? Mahatsiaro ho milentika aho
Abeliko dia hoy izy:
Salama Mai, napetrako ny totohondry teo amin'ny nipples tokony ho 15 taona lasa izay, tsy mbola nanana olana tamin'izy ireo aho, na tamin'ny resaka firaisana ara-nofo, tsy nanana foza aho, ny marina dia ny famakiana ilay lahatsoratra, tsy fantatro tanteraka ny zava-drehetra. lazain'izy ireo, ny fahasosorana, ny scuffs, ireo mifatotra amin'ny akanjo, mividy akanjo "manokana" noho ny fanindronana, raha efa 3 volana sy tapany no nanaovanao azy, dia heveriko fa raha tsy maharary izany, na tsy miteraka olana izany, tohizo, naharitra 3 volana ianao noho ny nitondrako ahy, fa nandroso aho.
Valio i Abeluko
FEPETRA dia hoy izy:
Miresaka ve misy karazana nipple mety tsara amin'ity kavina ity?
Valiny tamin'i Bri
Mila vanim-potoana voafaritra ve ianao vao afaka manindrona?
Manana ny fanindronana ny lohako roa aho, fa ny marina kosa toa ilay zazavavy, avy eo amin'ny sisiny ary misy baolina.
Ratsy ve izany? ?
Efa natahotra aho, ny sabotsy 17 oktobra lasa teo no nataoko
Valiny tamin'i Saray
Naratra be ve? Te-hanao an'io eo amin'ny nipples ihany koa aho fa mahatsapa fa maharary be
même dia hoy izy:
Tsy dia mandratra izany fa mamporisika ahy ny hanao azy io amin'ny iray ihany
Mamaly an'i Meme
Gonzalez dia hoy izy:
Ara-dalàna ve ny mandeha rà nefa tsy mandratra tena na rehefa manasa azy?
Valiny tamin'i González
Andao hojerentsika, ny andro voalohany ihany aho no nandatsa-drà nefa tena kely dia kely, raha sanatria tafahoatra loatra izany dia mila mankany amin'ny toerana nanaovanao izany na tany amin'ny dokotera ianao
Ny tiako ho fantatra dia raha ratsy tarehy ny nipples raha esorinao ny fanindronana: /
Salama, nahazo ny fanindronana aho tamin'ny volana Mey ary nanomboka teo dia tena lehibe izany (raha ampitahaina amin'ny iray hafa dia avo roa heny), tamin'ny voalohany dia nieritreritra aho fa noho ny fiakaran'ny vidim-piainana nefa dia mbola mitoetra ihany. Inona no mety ho?
Salama! Manontany tena aho, 3 andro teo ho eo no nahazo ilay piercing aho ary avy eo dia nanomboka mangidihidy, voan'ny aretina ve sa inona? Help to
Ny tatoazy vaovao an'i Zoë Kravitz dia tafiditra ao anaty lisitry ny tombokavatsa misy an'ity mpanakanto ity
Tatoazy ho an'ireo tia moto